गण्डकीका सभासदको भत्ता बढ्यो ! – Saurahaonline.com
गण्डकीका सभासदको भत्ता बढ्यो !
पोखरा बैशाख २२ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामै घर हुने सभासदहरुलाई घरभाडा सुविधा दिने तथा भत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ।
२०७४ साल चैतमा सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ६ (२) मा पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नै घर नभएमा मात्र सुविधा दिइने प्रावधान भए पनि मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले सबै सांसदलाई घरभाडा दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पोखरामा घर नहुने सभासदले मात्र प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका थिए। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यसअघि राजधानीमा घर हुने १३ जना सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन्। तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयानुसार राजधानीमा घर हुने सबै सांसदहरुले ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा आधा अर्थात मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ आवास सुविधा पाउने भएका हुन्।
कास्कीमा प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन्। पोखरामा स्याङजा तथा मुस्ताङका सांसदहरुको समेत घर छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुको सुविधा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरुको भत्ता २ सय ५० रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै प्रतिबैठक ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता बढेर एक हजार पुगेको छ। यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले यातायात सुविधा भन्दै सांसदहरुलाई ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
यता अहिले दलका सभापति र सचेतकहरुले सवारी साधन उपलब्ध नहुन्जेलसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खर्च दिइने भएको छ। हाल, समितिका सभापतिहरुलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराईएको छ भने प्रमुुख सचेतकले संसद सचिवालयका एक्स्ट्रा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्।
सबै दलका सचेतकहरुले हालसम्म सवारी सुविधा नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सवारी नपाउन्जेलसम्म पनि उक्त सुविधा नलिएका सचेतकहरुलाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयानुसार प्रदेशका सांसदहरुको सुविधामा मासिक लाखौँको व्यवभार थपिएको छ।